Faadumo Jaamac Jibriil“Ololihii ka hortaga xaalufka deegaanka guul ayaan ka gaarnay” ( dhegayso) – Radio Daljir
Abriil 29, 2019 8:39 b 0
Faadumo Jaamac Jibriil oo u dhaq dhaqaaqda ka hortaga xaalufka deegaaka ee Puntland ayaa waraysi gaar ah oo ay siisay radio Daljir waxa ay uga hadashay guulihii laga gaaray ka hortaga xaalufka iyo caqabadihii ay kala kulmeen .
Waxa ay sheegtay in dhuxukaysatada ay yihiin dad hubaysan, ilaa iyo haatan aysan jirin dowladda wax ka qabata.
Waxa ay sheegtay in ololihii ay galeen ee lagaga hortagayay xaalufka deegaanka uu gaar heer dadku ay isxil qaamaan oo ay xoolo dhaqatada ay dhuxulayaasha la dagaalamaan.
Faadumo Jibriil ayaa ku guuleysatay abaalmarinta caalami ah ee ku saabsan ilaalinta deegaanka
wariye Xasan Heykal ayay uwarantay.
Askari lagu helay inuu ruux shacab dilay oo xukun ay ku riday maxkamadda Muqdisho